Shiinaha Tamar xoog leh oo dheecaan weyn leh oo hadda ah 48V 30Ah batari lithium ion oo loogu talagalay soosaaraha mootada iyo alaab-qeybiyeha | LIAO
1. Qolofta birta ah 48V 30Ah LiFePO4 baakidhka batari ee saddex-baaskiil koronto
2. Awood weyn oo leh waxqabad sare oo lagu kalsoonaan karo.
Qaabka Lambar ENGY-F4830T
Awoodda magaca 30Ah
Ugu badnaan lacag joogto ah 50A
Ugu badnaan dheecaan joogto ah 50A
Cabbir 360mm * 205mm * 165mm
Codsiga E-tricycle, koronto bixinta
3. Nolosha wareegga dheer: Unugga batroolka lithium ion ee dib loo soo celin karo, wuxuu leeyahay in ka badan 2000 wareeg oo 7 jeer ah batteriga aashitada leedhka.
4. Miisaanka Fudud: Qiyaastii kaliya 1/3 culeyska baytariyada aashitada leedhka, aad bay ugu fududahay dhaqaajinta iyo kor u qaadista
5. Dahabka macmalka ah ee lagu kalsoon yahay ee gacanta lagu hayo. Baakadka batterigana wuxuu leeyahay BMS ku-dhisan.
6. Badbaadinta sare: LiFePO4 waa nooca batari lithium-ka ugu amaanka badan ee laga aqoonsanyahay warshadaha.
7. Heer is-siideyn oo hooseeya: ≤3% ee awoodda magacaabidda bishiiba.
8. Tamarta cagaaran: Ma laha wasakhaynta deegaanka.
Baytariga Lithium Batroolka Korontada Wershadaha Warshadaha iyo Wararka
Korontada, oo ah il tamar muhiim ah leh ilaalinta deegaanka, nadaafadda iyo heerka beddelidda sare, ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa wax soo saarka iyo nolosha. Korantada waxaa loo isticmaalaa in lagu wado in lagu hagaajiyo qalabka wax lagu raaco, korna loo qaado horumarka kaarboonka yar ee warshadaha gaadiidka, in la yareeyo qarashka gaadiidka, lana keydiyo tamarta. , Ilaalinta deegaanka waa mid ka mid ah mowduucyada muhiimka ah ee ay darsaan wadamada adduunka oo dhan.
Kadib tobanaan sano oo horumar ah, waxaa loo adeegsaday dhinacyo badan sida basaska magaalada korontada ku shaqeeya, gawaarida korontada ku qaadata warshadaha iyo miinooyinka, gawaarida nadaafada magaalada korontada, injineernimada, tunelada, iyo gawaarida qaaska ah ee dhismaha tareenada dhulka hoostiisa mara. Saddex-baaskiillada korontadu waxay leeyihiin faa'iidooyinka ku-habboonaanta ku-habboonaanta, dabacsanaanta, dayactirka fudud, dayactirka habboon, iyo qiimaha hooseeya, si ay si fudud ugu safri karaan inta u dhexeysa waddooyinka cidhiidhiga ah.
1. Batariyada aashitada leedhka (baytariyada saliida leedhka) waxay leeyihiin qiimo jaban iyo waxqabad deggan. Inta badan gawaarida korontada ku shaqeysa suuqa waxay isticmaali jireen batteriga noocan ah. Laakiin cilladaha jira ayaa iska cad. Baytariyada aashitada leedhka waxay leeyihiin wasakheyn daran iyo nolol wareeg ah. Iyaga dhaqso ayaa looga tirtirayaa suuqa.
2. Nolosha wareegga dheer, ilaalinta deegaanka iyo badbaadada sare ee baytariyada lithium iyo baytariyada birta ah ee loo yaqaan 'lithium iron fosfate' ayaa ah xalka ugu habboon ee lagu beddelayo baytariyada aashitada leedhka sidoo kalena waa isbeddelka mustaqbalka.
Hore: PVC sanduuqa meertada dheer nolosha robot koronto 18V 12Ah LiFePO4 baakid batari leh nabadgelyada ugu fiican
Xiga: Wax saameyn ah oo xasuusta ah malaha 36V 30Ah LiFePO4 baakad batari leh tilmaame danab iyo gacan qabasho
Waxqabadka sare ee tayada wanaagsan 24V 60Ah LiFePO4 baakid batari loogu talagalay AGV
Nolosha wareegga dheer badbaadada ugu fiican 48V 50Ah LiFePO4 baakid batari loogu talagalay AGV